दुर्लभ मानिएका गैंडा मर्नेक्रम जारी ९ महिनामा ४१ वटा मरे या मारिए ! – Online National Network
Monday January 25, 2021 |
दुर्लभ मानिएका गैंडा मर्नेक्रम जारी ९ महिनामा ४१ वटा मरे या मारिए !
११ चैत्र २०७५, सोमबार ०१:१४
काठमाडौं, ११ चैत्र – दुर्लभ मानिएको एक सिङ्गे गैडा मर्ने क्रम बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चितवनमा ४१ वटा गैंडा मरेका छन्। साउनयता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३९ र डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरको कार्यक्षेत्रमा २ गैंडा मरेका छन्। प्राकृतिक तथा कालगतिले गैंडा मरेका हुन्।
मरेका गैंडामा एकदेखि दश वर्षका सातवटा, बीस वर्षसम्मका पाँच, ३० वर्षसम्मका सात र ३० वर्षभन्दामाथिका ५ वटा गैंडा छन्। सत्रवटाको मरेपछि कंकाल मात्रै फेला परेको थियो। प्राकृतिक कारणबाट गैंडा मर्ने क्रम बढेकोमा संरक्षणकर्मीले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। प्राकृतिक कारणले गैंडा मरेपनि त्यसको कारण पत्ता लागेको छैन। गत वर्ष २६ गैंडा प्राकृतिक कारणले मरेका थिए।
कतिपय गैंडा आपसमा जुधेर पनि मर्ने गरेका छन्। पोथीसँगको संसर्गका बेला भाले जुध्ने गर्छन्। केही गोही र साना बच्चा बाघको आक्रमणमा परेर मर्छन्। यो वर्ष गैंडा मर्नुको मुख्य कारण बासस्थान र बाढीलाई मानिएको छ। घाँसै मैदानको व्यवस्थापन र तालतलैया कम हुनु पनि कारण भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालले बताए। गैंडा धेरै भएको स्थानमा जुध्ने खतरा बढी हुन्छ। ‘बासस्थान र बाढीले बढी मरे भन्ने लागेको छ’, ढकालले भने।
चोरी शिकारीबाट गैंडा जोगाए पनि प्राकृतिक कारणले मर्ने क्रम बढेको छ। धेरै गैंडा मर्न थालेपछि अनुसन्धान थालिएको छ। पानीको गुणस्तरीयताको समेत परीक्षण गरिएको छ। मरेका गैंडाको अंगसमेत परीक्षणका लागि लगिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले अनुसन्धान थालेको हो। ‘गंैडा मरेको बारेको अनुसन्धान भइरहेको छ’, निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेले भने, ‘प्राकृतिक नै भए पनि धेरै मरेकाले चिन्ता बढेको हो।’
गत वर्ष राप्ती र नारायणी नदीमा आएको बाढीले बगाएको ११ वटा गैंडा उद्धार गरिएको थियो। बाढीबाट बगाएका नौवटा भारतबाट र एउटा त्रिवेणीबाट उद्धार गरिएको थियो। बाढीका कारण त्यसबेला चारवटा गैंडा मरेका थिए।
निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ देखि सन् २०१७ को चार वर्षको अवधिमा ६१ वटा गैंडा प्राकृतिक कारणले मरेका थिए। २०५८ सालमा चोरी शिकारीबाट ३७ वटा गैंडा मारिएको थियो। २०७३ सालपछि चोरी शिकारीबाट गैंडा मरेका छैनन्। सन् २०१५ मा गरिएको गणना अनुसार नेपालमा ६४५ गैंडा छन्। तीमध्ये ६ सय पाँच चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छन्।
सेफ्टी ट्याङकी खस्यो गैंडा
होटलको सेफ्टी ट्याङकीमा खसेर एउटा गैंडा मरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका–२३ स्थित टाईगर ल्याण्ड होटलको सेफ्टी ट्याङकीमा करिब २० वर्षको पोथी गैंडा मरेको हो। सेफ्टी ट्याङ्कीको ढकनी कमजोर भएका कारण गैंडा खसेको हो।
गैंडा मरेको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालले बताए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्किएको गैंडा बिहान साढे चार बजे सेफ्टी ट्याङकीमा खसेको थियो। – अन्नपूर्ण दैनिक
निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको तयारी
वैवाहिक जीवनमा बाँधिए मुख्यमन्त्री
ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत
काठमाडौं उपत्यकामा फेरि एक सातालाई थपियो निषेधाज्ञा
तपाई पाद्नु हुन्छ ? जान्नुस पादबारे २५ रोचक तथ्यहरु
खानेपानी मन्त्री बिना मगरबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी
लाेक गायीका सर्मिला गुरुङको तिज गित बजारमा ‌(भिडियो सहित)
एसईई परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित
अब मोवाइललेनै गाडी चलाउन सिकाउने कसरी त जान्नुहोस
निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको तयारी तीव्र, ‘तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न समस्या छैन’
वैवाहिक जीवनमा बाँधिए मुख्यमन्त्री राई र मोडल जाङ्मु
ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने प्रचण्ड–माधव पक्ष नेकपाको निर्णय
नेकपा दुवै पक्षको दाबी निर्वाचन आयोगले नमान्‍ने
दाहाल-नेपाल नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै, ओलीलाई कारबाहीको तयारी
‘पहिलो चरणमा प्रदेश दुई, गण्डकी, लुम्विनी र सुदूरपश्चिममा निर्वाचन’- प्रधानमन्त्री ओली
आज काठमाडौँमा नेकपा (प्रचण्ड-माधव) पक्षको शक्ति प्रदर्शन, एक लाख बढी कार्यकर्ता उतार्ने दाबी
काँग्रेसले आज देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्दै
भोली आईपुग्ने कोरोना खोप शुरुमा कसले लगाउन पाउँछ, स्वास्थ मन्त्रालयले छान्यो यस्ता मान्छे
भारतले अनुदानमा दिएको खोप ल्याउने प्रक्रिया आजबाट सुरू